warkii.com » Solskjaer Oo Magacabaay Isbeddelka Ugu Weyn Ee Ku Dhacay Martial & Xirfadaha Ay Ka Siman Yihiin Rashford, Greenwood Iyo Anthony
Solskjaer Oo Magacabaay Isbeddelka Ugu Weyn Ee Ku Dhacay Martial & Xirfadaha Ay Ka Siman Yihiin Rashford, Greenwood Iyo Anthony
Ole Gunnar Solskjaer ayaa aaminsan in weeraryahanka Anthony Martial uu isbeddel weyn ku dhacay qaab ciyaareedkiisa iyo shaqada uu u qabto Manchester United.
Weeraryahanka reer France ayaa intii uu bilaabmay sannadka 2020 waxa uu horumar ka sameeyey gool dhalinta iyo qaabka uu ciyaartoyda kooxda ula shaqeeyo, iyadoo uu dhaliyey saddexlaydiisii ugu horreysay intii uu joogay Manchester United.
Red Devils oo aan laga badin 17kii ciyaarood ee ugu dambeeyey tartamada oo dhan, waxay isla heleen saddexlay weerar ah oo ka caawiyey in afar ciyaarood oo isku xigta ay kooxdu dhaliso min saddex gool iyo ka badan.
Martial iyo Marcus Rashford ayaa abuuray weerar halis ah, laakiin laacibka reer France waxa uu kali kusii ahaa afka hore intii uu Marcus maqnaa, waxaa se uu waxqabadkiisa ugu weyn yimid intii horyaalku dib u bilaabmay bishii hore isaga oo dhaliyey afar gool.
Solskjaer oo ka hadlay qaab ciyaareedka Martial ayaa waxa uu magacaabay isbeddelka ugu weyn ee uu sameeyey laacibkani iyo wixii uu hore uga dalbaday oo uu kasoo baxay, waxaanu yidhi: “Aad ayaan ugu faraxsanahay Anthony. Waad Arkaysaa heerkiisa shaqo iyo dhismaha kubaddiisa. Waxa jirtay qiimayn aanu xili ciyaareedkii hore ku samaynay weeraryahannadayada, waxaanu dhab ahaantii kasoo baxay caqabadihii, isaga oo ka jawaabay su’aalihii shaqadiisa aan ka weydiiyey. Waa inaanu cadaadiska ka bilowno saddexdayada afka hore, waxaanu isagu taagan yahay heerkaas.”
Intaas kaddib waxa uu Solskjaer u gudbay Rashfrod iyo Greenwood, waxaanu yidhi: “Marcus wali waa da’yar sidoo kalena horumar samaynaya. Dhamaan saddexdoodaba (Martial, Rashford & Greenwood), waxaad arkaysaa iyagoo kubadda isku-dhiibaya, dhalin karaya, jidh ahaan u loollamaya, isla markaana ordaya oo fursado u abuuraya kuwa kale. Waxaanu isku dayaynaa inaanu horumarino dhamaantood waqtigan; tani maaha shaqo maalin kaliya ah, ama shay mararka qaarkood ah, laakiin tani waa abuuritaanka caado wanaagsan.”
Manchester United oo Isniinta la ciyaaraysa waxay soo geli doontaa kaalinta afraad ee horyaalka Premier League, iyagoo hal dhibic ka sarrayn doona Chelsea oo guul-darro la kulantay toddobaadkan.